မော်ကွန်းတိုက် traintips | စာမျက်နှာ3၏5| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ သငျသညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်! အဆုံးမဲ့သောနေရာများနှင့်အတွေ့အကြုံများ, သငျသညျအနှစ်ပေါင်းများစွာခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုလွဲချော်ပါတယ်တူသောနေဆဲခံစားရနိုင်ကြောင်း. ၎င်းသည်ခရီးသွားအမှားများကျူးလွန်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်, နှင့်ထွက်ပျောက်ဆုံး…